Politika momba ny tsiambaratelo - Goldenlaser
Golden Laser dia hanaja sy hiaro ny fiainanao manokana. Hiaro izay vaovao omenao izahay rehefa mitsidika an'ity tranonkala ity.
ao amin'ity tranonkala ity, azonao atao ny mankafy ny serivisy omena, toy ny fametrahana filaminana, fahazoana fanampiana, fisintomana rakitra ary hetsika atao amin'ny fandraisana anjara Alohan'ny handehananao izany dia takiana aminao ny mameno ny mombamomba anao manokana izay ahafahanay manome safidy mety sy hamoaka valisoa ho anao raha misy izany.
Manatsara ny serivisinay sy ny vokatray (ao anatin'izany ny fisoratana anarana) izahay mba hamenoana ny filanao. Raha azo atao dia mila fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasanao izahay, traikefa amin'ny vokatrao sy ny fomba fifandraisana.
ho fiarovana tanteraka ny mombamomba anao ato amin'ity tranonkala ity. Amin'ny alàlan'ny fampahalalana, ny Laser Laser anay dia hanome ny serivisinao tsara sy haingana kokoa. Amin'ny tranga sasany, afaka mampahafantatra ny fikarohana momba ny tsena farany sy ny mombamomba ny vokatra izahay.
dia adidintsika ara-dalàna ny miaro izay fampahalalana angoninay avy aminao, ao anatin'izany ny hevitra na fomba hafa. Midika izany afa-tsy Golden Laser tsy misy antoko fahatelo mankafy ny fampahalalana anao.
04) Fiarovana amin'ny fampahalalam-baovao
Mikasa ny hiaro ny mombamomba anao tanteraka izahay, hisorohana ny fahaverezana, fampiasana tsy araka ny tokony ho izy, fitsidihana tsy nahazoana alàlana, famoahana, herisetra ary fanakorontanana. Ny angona rehetra ao amin'ny mpizara anay dia miambina firewall sy teny miafina.
Cookies Cookies dia angon-drakitra noforonina rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao ary voatahiry ao amin'ny lahatahiry cookie amin'ny solo-sainao. Tsy handrava na hamaky data amin'ny solosainao velively izy ireo. Cookies mitadidy ny tenimiafinao ary mizaha endrika izay hanafaingana ny fivezivezenao amin'ny tranonkalantsika amin'ny manaraka. Azonao atao koa ny mandà ny cookies raha tsy tianao.
Fandikana an'ity fanambarana ity sy ny fampiasana tranokala an'ny Golden Laser. Raha miova amin'ny fomba rehetra ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia hametraka kinova nohavaozina amin'ity pejy ity izahay ary hanamarika ny daty eo amin'ny tongotr'ity pejy ity koa. Raha ilaina dia hametaka takelaka azo atao amin'ny Internet izahay hampahafantatra anao.
Izay disadisa aterak'ity fanambarana na fampiasana tranonkala ity dia hanaja ny lalàna mifehy ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina.